Malunga - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Isimo sengqondo sithatha isigqibo kuyo yonke into, iinkcukacha zichonga impumelelo
I-Ouzhan (Shanghai) Co., Ltd.yinkampani yokudibanisa ushishino kunye norhwebo. Umzi-mveliso ubekwe kuKwakha i-38, iJinguo Industrial Park, engu-500, iZhenkang Road, iSithili saseJinshan, eShanghai. Inkampani igubungela indawo ye-1200 yeemitha zesikwere kwaye inabaqhubi abamalunga nama-30, iinjineli ezili-10 kunye nabahloli abasemgangathweni aba-5. Eyona mveliso iphambili yokuphela kunye nezixhobo zokuqhubekeka ngaphezulu kwama-30. Amaqabane ethu aquka iTrutzschler, iGuzzini, iSafeFire, iFujiXerox, iGhrepower, iRec njalo njalo.
Urhwebo lwe-Ouzhan (iShanghai) Co., Ltd. lukhethekile ekusebenzeni okwenziweyo kwazo zonke iintlobo zoomatshini kunye nezixhobo. Iitekhnoloji zethu zokuqhubekeka zibandakanya i-CNC yokugaya, ukujika kwe-CNC, ukugaya okungaphakathi kunye nangaphandle kwangaphandle, ukusika kweLaser kunye nokugoba isinyithi. CNC machining, Jika-Milling machining, 4/5 axis CNC machining, nasekuqiniseni nasekufeni-eyahlulayo njalo njalo.
Iimveliso zethu zisetyenziswa kumacandelo ahlukeneyo, afana noomatshini bempahla eyolukiweyo, ukuveliswa kwamandla omoya, izixhobo zelebhu, izixhobo zonyango, ukukhanya kwezorhwebo, iarospace njalo njalo.
Izixhobo zethu ezingundoqo zokuvelisa zingeniswa zivela eSwitzerland naseJapan.
2. Amandla aQinisekileyo eR & D
Sineenjineli ezili-10 kwiziko lethu le-R & D, bonke ngoogqirha okanye oonjingalwazi abasuka kwiDyunivesithi yeSayensi neTekhnoloji yase China.
3. Ulawulo loMgangatho olungqongqo
Sinabasebenzi abahlola umgangatho wobungcali kunye nezixhobo, ngokwemigangatho yamanye amazwe kwiimveliso zakho zokuvavanya, kwaye ukhuphe ingxelo yovavanyo eneenkcukacha.
4. I-OEM kunye ne-ODM yamkelekile
Ubungakanani ngentando kunye neemilo ziyafumaneka. Wamkelekile ukwabelana ngemizobo yakho ye-2D okanye ye-3D nathi, masisebenzisane ukwenza ubomi bube nobuchule ngakumbi.
Okwangoku sinazo iiseti ezingaphezu kwama-30 izixhobo machining phambili kunye novavanyo, uninzi lwabo amazwe evela eSwitzerland naseJapan.
I-Ouzhan inemigca esibhozo yemveliso kwaye inokukhupha iziqwenga ezingama-3000 zeemveliso ezigqityiweyo ngosuku olunye.
Sinearhente yamalungiselelo okwenziwa kwamazwe aphesheya kwindawo yengingqi, kwaye sihlala siyigqiba imveliso ngexesha, elinokuthunyelwa kumazibuko olwandle okanye kwizikhululo zeenqwelo moya ngosuku olufanayo.
Iimveliso zethu ziya kuvavanywa kathathu ngaphambi kokuthunyelwa: ① Isitshixo esizenzekelayo; Det Ukubhaqwa ngesandla; Uvavanyo lweesampulu. Okokugqibela, khupha ingxelo yovavanyo.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. yasekwa ngo-2005 kwaye sele ukuvelisa iindawo oomatshini kangangeminyaka eli-15. Oko kwaqala, emva kokuba sifumene abathengi be-3D okanye ii-CAD, iinjineli zethu ziya kuzihlalutya. Ngesiseko sokuhlangabezana neemfuno zabathengi, sinokuhlala sibeka phambili iingcebiso zobuchwephesha ukugcina iindleko zabathengi okanye ukugqibezela imveliso.
UMSEBENZI WER & D
Kodwa kwabo bathengi bangenayo imizobo, abaxhasi bethu banokukunceda.
1.Ukuba unemveliso eshelfini ofuna ukuba siyivelise, kodwa awunayo imizobo ye-3D, kufuneka uthumele imveliso yakho kuthi, singazenza iimephu zayo kwaye emva koko uqalise ukuvelisa.
2. Ukuba awunayo imveliso okanye imizobo, kulungile. Yabelana nje ngezimvo zakho nathi. Iinjineli zethu ziya kuyila imizobo ngokweemfuno zakho kwaye uzithumele kuwe ukuze uqinisekise emva kovavanyo.
I-Ouzhan okwangoku inabasebenzi abangaphezu kwama-30 kwaye ngaphezulu kwe-10% ikunye neeMasters okanye izidanga zobugqirha. Iinjineli zethu ezilishumi zonke ziphumelele kwiiyunivesithi eziphezulu zaseTshayina eziphambili koomatshini kwaye zinolwazi olunobutyebi. Abasebenzi bethu kurhwebo lwangaphandle ngabaphumeleleyo kwezorhwebo, abanobuchule kwinkqubo yorhwebo lwangaphandle. Amasebe amabini enkampani yethu anokuncedana kwaye akuzisele eyona nkonzo intle.
Inkcubeko yequmrhu lenkampani inokwenziwa kuphela ngeempembelelo, ukungena kunye nokudityaniswa. Ukuphuhliswa kwe-Ouzhan kuxhaswe ngamaxabiso asisiseko kule minyaka idlulileyo ------- Ukunyaniseka, ubuGcisa, uxanduva, ukuBambisana.
I-Ouzhan ihlala ihambelana nomgaqo, ojolise ebantwini, kulawulo lwengqibelelo, umgangatho konke, igama premium Ukunyaniseka iye owona mthombo wokhuphiswano luka-Ouzhan.
Ukuyila izinto ezintsha yinkcubeko ka-Ouzhan.
Ubuchule obutsha bukhokelela kuphuhliso, olukhokelela kukonyuka kwamandla.
Abantu bethu benza izinto ezintsha kumxholo, indlela yokusebenza, itekhnoloji kunye nolawulo.
I-Ouzhan inoluvo olomeleleyo loxanduva kunye nomsebenzi kubathengi nakuluntu.
Ibihleli ingamandla okuqhubela phambili nophuhliso lwe-OuZhan.
I-Ouzhan ikwazile ukufezekisa ukudityaniswa kwezixhobo, ukuhambelana ngokufanayo, njengesebe lethu lobuchwephesha kunye nesebe lethu lezorhwebo, bayeke abantu abaqeqeshiweyo banike umdlalo opheleleyo kubungcali babo.
1. inkonzo ngomatshini Elungiselelweyo
2. Ukuveliswa kwemisa
3. Uyilo lwemveliso
4. Ukwenza isampulu
5. Inkxaso kwezobugcisa
6. Ukuvavanywa kwemveliso
7. Inkonzo yamalungiselelo nokuthumela ngaphandle
8. Emva kokuthengisa inkonzo